Steel SAARKA guryaha EU Balanqaadyo PRICE KA MEPS - Shiinaha Ningbo Ke Ming Makiinado
EU SAARKA guryaha Balanqaadyo PRICE bir KA MEPS
qiimaha ku salaysan German kacay, ee August / September, ay sabab u xadeyn ku saabsan qadarka ee wax ka soo saarayaasha Yurub iyo dibada laga heli karaa. Sida laga soo xigtay cadadkii ugu dambeeyay ee MEPS Yurub Steel Review, sahayda weli tahay mid xaddidan, gaar ahaan waxyaabaha dahaarka leh, oo leh waqti hogaanka baxay si uu sanad-dhamaadka iyo wixii ka dambeeya. kaydka xafiiska adeegga si degdeg ah yaraynta sida tiro ka mid ah dhamaadka-users, kuwaas oo sida caadiga ah ku dhici lahaa ganacsatada toos ah la dhagaxshiidka, iibsanayso ka qaybiya si ay u si dhakhso ah u helaan bir.
xarumaha adeegga Talyaani sheegaan cidhiidhi sahayda. Si kastaba ha ahaatee, xadad ay sii wadaan in ay la tuujiyaa. Wixii la joogo, macaamiisha ayaa diidan inay bixiso. waaxda qaybinta waxaa uu leeyahay awood aad u badan iyo tiro ka mid ah stockists ayaa weli iibinta arrin qalafsan.
In UK, inta badan qiimaha alaabta dhagax strip hormartay, bishan, sida saarayaasha qaaradda Yurub u qaaday qiimaha ku salaysan in mowjadda jecleystay pound taagta daran. Qeybiyeyaasha ayaa hadda hadalka ee u kaca oo dheeraad ah. distributors Most codsanayso dhagax wax koror ah, si xadad waa la aqbali karo. Kaydka yar yihiin sabab u dhac sahayda. Waxaan ogaan helitaanka yar ka ganacsatada.
iibsada Belgian ayaa sheegay in cadaadis ee qiimaha sare ma turjumayo koritaanka wax la mid ah in baahida loo qabo, inkastoo iibka xarunta adeega si macquul ah oo wanaagsan yihiin. buugaagta si Mill, inta badan waxyaabaha dhagax strip, waxaa ka buuxa in December, ama xitaa wixii ka dambeeya. Tiro aad u yar yihiin oo ay jiraan dib u dhac ah oo ku saabsan jeer hogaanka bixinta hore u dheer. Qaybiya sheegaan in qiimaha dhagax wax sare aan lagu saleyn karaa qiimaha u gadista kiisaska oo dhan.
la'aanta A gartay ah helitaanka keentay in tiro ku saleysan sare ee Spain. Xarumaha Adeegga ka walaacsanahay in macaamiisha ay qayb ahaan uun aqbali doonaa kaca dhagax. Qaar ka mid ah dadka iibsanaya fileynaa in arrimaha sahayda la xalin karaa iyada oo quarter ugu horeysay 2017 Aan ugu yaraan, maxaa yeelay tartan-jaban laga keeno ayaa dalab ka tiro ka mid ah ilaha dal saddexaad, oo aan saamayn ku antidumping tallaabooyin.
waqti Post: Aug-13-2018